Man'eewwan keessa Cita Sararaa Saaguu
Cita sararaa man'eewwan keessa saaguu
Man'eewwan wardii LibreOfficeCalc keessa cita sararaa saaguu
Man'ee wardii keessa cita sararaa saaguuf, AjajaCtrl+Enter dhiibi.
Sararicha naqaatti osoo hin taane, kun kan hojjetu qaree gulaalli barruu man'eecha keessaa waliin qofa. Kanaaf jalqaba man'ichaa lama cuqaasi, achii qubannoo barruu'ichaa bakka cita sararaa barbaaddutti takkaa cuqaasi.
Arfii sarara haaraatiif qaaqa Barbaadii fi Bakkabuusii barbaaduu ni dandeessa\_n akka himannoo idileetti. Barruu faankishinii CHAR(10) gara arfii sarara haraatti saaguuf foormulaa barruu fayyadamuu dandeessa.
Marsuu sararaa ofumaaniif man'eewwan LibreOfficeCalc dhangeessuu.
Man'eewwan kanneen cita sararaa ofumaaniif barbaadde filadhu.
Dhangii - Man'eewwan - Hiriirfaman fili.
Barruu ofumaan marsuufiladhu.
Gabateewwan galmee barruu Barreessaa LibreOffice keessa cita sararaa saagi.
Man'ee gabatee galmee barruu keessa cita sararaa saaguuf, furtuu Enter dhiibi.
Innaa ati gamaa-gamana dhuma tokko tokkoo man'ee barreessitu citni sararaa ofumaanii ni dalagama.
Title is: Man'eewwan keessa Cita Sararaa Saaguu